MAYELANA NATHI - Xishun Plastics Factory
CALISA ISHIDI ELICILE ACRYLIC
ISHIDI ELICACILE LE-ACRYLIC ELIKHIWE
COLOR UMBALA ACRYLIC ISHIDI
ISHIDI LOKUMBALALA OKUPHUMILEYO ACRYLIC
ISHIDI ELIQHELEKILE LE-ACRYLIC
ISHIDI LE-ACRYLIC LE-ANTI-SKRATCH
ISHIDI LE-ACRYLIC LE-ANTI-FLAMING ACRYLIC
DIFFUSER ACRYLIC ISHIDI
I-MIRROR ACRYLIC ISHIDI
ACRYLIC DECORATION ISHIDI
ISHIDI LE-MABLE ACRYLIC
ISHIDI LE-GLITTER ACRYLIC
ELINYE IPHETHINI ISHIDI ACRYLIC
IMIKHIQIZO YE-ACRYLIC NGENGEZIWE
I-Xishun Plastics Factory
I-Xishun Plastics yasungulwa ngo-1996, iwukukhiqiza, ukuthengisa, ukucubungula ishidi le-acrylic njengenye yezinkampani eziphethwe ngokuphelele. Ipulasitiki ye-Xishun inemboni yokukhiqiza ipuleti le-extrusion grade, imboni yokukhiqiza ipuleti lebanga kanye ne-acrylic process processing plant, umkhiqizo wayo i-GARY, isidayise kahle emazweni nasezifundeni ezingaphezu kuka-50, futhi isiyibhizinisi elibalulekile ekukhiqizeni amapuleti asekhaya e-PMMA. Ikhwalithi yayo kanye nesevisi yangemuva kokuthengisa iye yanconywa futhi yaqashelwa abantu embonini. I-Xishun Plastics yethula ubuchwepheshe obuthembekile kanye nesipiliyoni sokuphatha ukukhiqiza ekhaya naphesheya. Imikhiqizo eyinhloko ishidi le-PMMA (ibanga le-extrusion, ibanga lokuphonsa), i-MMA monomer kanye nemisebenzi yezandla ye-acrylic, lapho amapuleti angakhiqizwa khona ngokucaciswa okuhlukene nemibala ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende.
Ngemuva kweminyaka yokuthuthuka, imboni yethu ihambisana nezikhathi, ibambelela enjongweni yokuphatha ibhizinisi "yokuthuthukiswa okubanzi nokujulile, okunqobayo", amandla obuchwepheshe aqinile, alwela ukusinda ngekhwalithi, alwela ukuthuthukiswa kwesayensi nobuchwepheshe, futhi ilwela ukuthuthukiswa ngamathalente. Yenza imboni yethu igcine umfutho omuhle wentuthuko emqhudelwaneni wemakethe. Izinga lemboni liyakhula unyaka nonyaka, futhi inzuzo yezomnotho ikhula unyaka nonyaka.
Izidingo zakho, ukuqaphela kwethu! Siyathembisa: "isevisi ecabangelayo, imikhiqizo yekhwalithi, amanani akhethekile", njalo unamathela "ikhwalithi kuqala, ikhasimende kuqala" inhloso, ukukunikeza imikhiqizo emihle.
Ukwandisa imakethe kuwumgomo wethu, sizokwenza ngcono izinga lenkonzo, silwele ukudala inani lomkhiqizo, sizimisele ukuqinisa ukuxhumana, ukubambisana okuqotho, ukuthuthukiswa okufanayo, nokuhlanganisa izandla ukuze senze ikusasa elingcono.
Ngesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengama-24, i-XISHUN acrylic izuze udumo oluhle kakhulu ngobungcweti bethu kanye nekhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu. Uma kukhona ithuba lokuthi sizobambisana ngokuzayo, i-XISHUN izoqiniseka ukuthi izoba uzakwethu othembekile!
ITHOLAKALA NGO-8AM UKUYA KU-18PM
Ikheli: No.1 Dieshizhihekou, Yangda Rd., Lunjiao, Shunde district, Foshan city, Guangdong Province
Ucingo: +86 0757 27886999